DHIRTA TUFAAXA AH EE GEEDKA GEEDKA: GEEDKA UGU FIICAN EE DHIRTU KA SAMAYSO - GEED GEEDEEDKA
Jiilaalku si dhakhso ah ayuu u socdaa oo u soo dhowaadaa beertaada, iyo dabaysha iyo shimbiraha, duullaankii jiirka iyo cayayaanka in ka badan jilbaha.
Dhammaan tani waxay dhaawici kartaa beertaada tufaaxaaga.
Waxaad ka ogaan doontaa sababaha dhirta dhirta loo yaqaan 'whiten', in la gashado oo keliya guga, sida loo ciribtiro iyo sida loo ilaaliyo beertaada ka soo jeeda arimo aan wanaagsaneyn iyada oo loo marayo geedo cagaar ah oo habboon.
Si aad u fahamto sababta geedaha xoqida ah, waxaa haboon in aad wax yar u sheegto jilifkooda. Geedka, jilifku wuxuu u eg yahay maqaarka dadka. Waxay la kulantaa xaaladaha deegaanka ee khatarta ah iyo khatarta ah isla markaana ilaaliya xubnaha gudaha. Waxaa jira xaalado badan oo aan fiicnayn oo qoryo ah: duufaan deg-deg ah, duufaan, dufan daran iyo qorrax-dhac, saameynta cayayaanka iyo ilkaha ee jiirka. Caleenta geedku wuxuu heli karaa sunburns ama frostbite, wuxuu ku xanuunaa, cirridka iyo dildilaaca. Sidoo kale dhaawaca maqaarka bini-aadamka, dhaawaca cagaarshadu waxay keenaysaa in lagu dhex galo infekshanka iyo cayayaanka geedka, daciifinta, muddadii kacsaneyd iyo dhimasho.
Sababtan awgeed, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo caleenta geedaha.
Si aad u ilaaliso una u baahan tahay cadaan, waxay kuu ogolaaneysaa inaad:
ka ilaali jilifaha gubashada - xilliga jiilaalka iyo horraanta gu'ga, marka uusan jirin caleenta adeega dabiiciga ah ee ka soo baxa qorraxda qoraxda;
ka ilaali geedka tufaaxa isbeddelka heerkulka iyo ka hortagga jilifka jilicsan;
ilaali geedkii tufaaxa laga bilaabo ficilka cayayaanka xayawaanka, kuwaas oo jiifinaya dirxiga ee jilif.
Ma taqaanaa? Limestone waxaa laga sameeyaa xeebta iyadoo ay sabab u tahay raasamaalka haraaga dabiiciga ah (inta badan laga helo qolof). Nidaamka isdaba-gelinta ee ugu hooseeya ayaa ka dhacay xilligii Silurian iyo Jurassic.
Waa qalad si loo daaweeyo dhirta dhirta ee geedaha tufaaxa sida shaqeyn ku meel gaar ah. Bannaanka waaya-aragnimada leh ayaa ogaaday in cayayaanka geedaha ee xayawaanku uu yahay qiyaas ilaalin oo wax ku ool ah.
Goorma ayay tahay in geedo tufaax laga sameeyey?
Bannaanka beeraha ayaa sheeganaya in ugu badan faa'iido leh geedo cadho ah laba ama saddex jeer sannadkii:
Geedka ugu muhiimsan ee ugu muhiimsan ee geedaha waxaa la qabtaa xilliga dayrta ee erayada soo socda: laga bilaabo Oktoobar ilaa Nofembar;
cusboonaysiinta, soo noqnoqoshada dhirta geedka guga guga waxaa lagu sameeyaa taariikhahaas laga soo bilaabo dhammaadka Febraayo ilaa bilowga Maarso;
Qodobka saddexaad ayaa la sameeyaa bisha Luulyo.
Haddii aad rabto inaad beerato xayawaan tufaax ah, baro naftaada noocyo kala duwan oo tufaax ah: gaaban, qori, aroortii hore iyo goor dambe, jiilaalka-adag.
Tixgeli marka cilladda la gooyo xilliga guga.
Waxay ku sameeyaan gudaha Febraayo - horraantii Maarso, waqtigaa marka jirriddu ay kululaan karto heerkul ah 11ºC inta lagu jiro maalinta, taas oo keeneysa socodka barafka hore. Isla waqtigaas, jiilaalka iyo bilowga gu'ga waxay leeyihiin habeenno aad u qabow, marka heerkulku hoos udhigi karo -10ºC, tani waxay dhalin doontaa qaboojiyaha casiirka, dillaaca unugyada iyo samaynta jilaalka barafka.
Rinjiga cad ayaa lagu daboolay guntimaha dhirta tufaaxa iyo lafaha qalfoofka, si wax ku ool ah u dallacaya qorraxda qorraxda, waxay ka caawisaa in jilifku ka ilaaliyo kuleylka oo uu ilaaliyo geedka tufaaxa bilawga hore.
Aynu aragnay marka la cadeynayo tufaax xilliga dayrta. Waa cadaantani xilligan sanadka waxaa loo tixgeliyaa inay tahay tan ugu muhiimsan. Miraha geedo tufaax ah oo aan nidaamkan ahayn ma aha oo kaliya luminta saamaynteeda qurxinta, laakiin sidoo kale u dhintaan, tan iyo isbedbeddel fiiqan heerkulka xilliga dayrta iyo jiilaalka ayaa horseedaya dhaawac culus ee jilifkii geedka tufaaxa.
Kalluumeysiga waa lagama maarmaan october-novemberka hor inta uusan dhaxan bilaabmin. Haddii aad si guul leh u qabatid cadaan, beerta ayaa si gebi ahaanba looga ilaalin doonaa dhaxan daran, laga bilaabo dhismaha dhaxan ee laanta iyo dogobka, iyo sidoo kale ka soo jeexjeexayaasha hunguri ee cuno jilif ee geedaha tufaaxa.
Baro wax badan oo ku saabsan tallaabooyinka daryeelka ee aad beerta u baahan tahay dayrta: jeeriga, isteroberi, fersken, canab, currants.
Ma lagama maarmaan in la caddeeyo dhoobada dhalinyarada
Geedo yar yar oo leh jilif cagaaran iyo alwaax aan dhamaystirnayn ayaa lagula talinayaa. ha qoryaan. Sababta ugu weyn ee diidmada xakamayntu waxay tahay in xoqidku uu gubi karo jilicsanaan la'aanta geedku, wuxuuna gacan ka geysanayaa xayiraadda hawada ee jilifka geedka iyo qoryaha. Sababtan awgeed, geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka ayaa cidhiidhi gelinaya geedo yar yar.
Bannaanka u khibrad badan ayaa lagula talinayaa in ay ka buuxaan dadka waaweyn iyo geedaha tufaaxa dhallinyarada. Haddii geedo tufaaxa dhallinyaradu aanay dhicin, markaa qaboojiyaha iyo qoraxdu waxay waxyeellayn karaan abuurista wax badan oo ka badan cad. Si aan waxyeello u gashan dhirta tufaaxa marka xoqan, waa inaad u hoggaansantaa talooyinka noocaas ah:
Xakamee feejignaanta xal looxa diyaarsan.
Halkii xal lime ah, waxaad isticmaali kartaa rinjiga biyaha ku salaysan ama rinji akrilik geedaha.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa biomask lacag ah.
Ma taqaanaa? Xilliyada XVII-XVIII, lime wuxuu ahaa qaybta ugu muhiimsan ee dhismaha guryaha iyo tuulooyinka. Dadka caadiga ah waxay awoodi kari waayeen inay dhistaan ​​guri ka mid ah xumbo, laakiin gurigana waa la heli karaa.
Noocyada ugu caansan ee loo yaqaan "whitewash"
Dhirta tufaaxa ee dhallinyaradu waxay noqon karaan kuwo isku dhafan oo isku dhafan. Waxa ugu muhiimsan waa ka dib markii rinjiyeynta jilifku ahaa caddaan, way neefsan kartaa waxaana si tartiib ah loo dhaqay off. Isku daridda shuruudahan oo kale waxaa ka mid ah kuwan soo socda: Maaddada lime, rinjiga biyaha ku salaysan, rinjiga biyaha kala-baxsan.
Si isku dar ah ee isku dhafka ah si aad ugu dhajiso jilicsanaanta geed geedka tufaaxa, ku dari karaan:
Macneheedu waa in aad naftaada u diyaargarowdo. Waa kuwan qaar ka mid ah cuntooyinka fudud ee geedaha tufaaxa ee dhalinyarada ah, oo waxaan ka jawaabi doonaa su'aasha: sida loo caddeeyo geedka tufaaxa xilliga dayrta.
Halbeegyada isku dhafan waa inay ku jiraan qaybaha saddexda nooc:
Macnooyin kaas oo siinaya cadaan (nuurad ama lime).
Habka ay xallintu u socoto koontada.
Macneheedu waa jeermi-dilid (badanaa la isticmaalo naxaas sulfate).
Waa muhiim! Taabashadu waa inay ahaato mid cad. Midab kale ma ilaalinayso sabuubyada yar yar oo ka yimaada qoraxda iyo isbedelka heerkulka. Daahirta si fiican.
Si aad u diyaariso xal xashiishad ah, waxaad u baahan tahay inaad isku dardarto maaddooyinka oo dhan marka loo eego ikhtiyaarka la doortay. Dhammaan maadooyinka ayaa kicin kara ilaa inta la siman yahay.
Xalka diyaarinta waa in uusan noqon mid aad u qaro, haddii kale lakabka qaro weyn ee dhoobada ayaa iska furi doona. Isku dar walwal ah oo dheeli ah ayaa daadin doona geedka tufaaxa. Kala duwanaanta saxda ah ee xalka diyaarinta waa marka dhumucda qiyaasta lagu daro 2-3 mm. Doorashada koowaad:
2.5 kg lime;
1 baaldi biyo ah;
0.5 kg oo ah copper sulfate;
0.2 kg kaneecada kiiska.
2.5 kg oo ah limeed biyo ah;
0.3 kg oo ah copper sulfate;
1 kg oo ah dhoobo dufan ah;
1 xayiraad oo ah digo lo'da.
2.5 kg jees jees;
10 qaado oo bur ah.
10 qaado oo saabuun.
2 kg oo cawlaan ah;
10 litir oo biyo ah;
0.2 kg oo dhoobo ah.
Waa muhiim! Si loo isticmaalo haraadiga iyo jiirarka si aan u taabto jilifka geedaha, 20 g of carbolic acid waa in lagu daraa xal kasta baaldi ka mid ah xal loo diyaariyey.
Tixgeli sida loo dhajiyo tufaax xilliga dayrta iyo gu'ga.
Haddii xaaqin jiilaalka aan la fulin, ka dibna guga, marka laga reebo dhirta geedka tufaaxa, waa lagama maarmaan in la diyaariyo laamaha qalfoofka iyo jirridda geedaha. Waxaa fiican in la sameeyo habraacyada soo socda ee maalinta qoyan, daruuraha.
Si aad u bilawdo, geedka tufaaxu waa lagama maarmaan xor ka ah jir jilicsanSi arrintan loo sameeyo, dharbaaxada ama saliidda hoostiisa hoosteeda gogol gashadaan oo ka saar jarjadaha xargaha dhuxusha oo si sahlan uga danbeeya. Waa lagama-maarmaan in la hirgeliyo astaamaha dhan iyo saddex meelood oo ka mid ah laamaha qalfoofka. Shaqada, waxaad qaadan kartaa gacmo-gashi gaboobay, iyo jilifka cilladda leh ayaa ka wanaagsan inuu gubo. Ka dib marka la nadiifiyo jilifka, waa in loo gartaa jeermiskaSababtoo ah, maalinta cadceeda ah, daawee shtamb iyo saldhigyada laamaha qaabab gaar ah: 5% xalil maadada buluuga ah ama HOM, Abigak-Peak, Oksikh.
Ku buufinta saxda ah waxaa lagu sameeyaa buufin (ganaax) laga bilaabo meel fog oo aad u dhow, sidaas darteed dareeruhu wuxuu sameeyaa qiiq, kaas oo si habsami leh u degaya jilifka, oo aanu ku socon. Waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo buufinta aroortii, sidaa darteed fiidkii ayaa geedka tufaaxa u dillaacey.
Waa wax aan loo baahnayn in la nadiifiyo sanad walba iyada oo la diyaarinayo bakteeriyada, tan iyo birtu waxay ku urursan tahay geedka iyo isugeyntiisa waxay noqotaa sun ah sunta tufaaxa. Si aad u ilaaliso beertaada astaamahan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad ku beddesho saabuun iyo xal ash ah oo aan waxyeello u geysan geed, laakiin wuxuu ka nadiifiyaa jilibka aan lahayn, iyo daaweynta fungicide.
Fungicides sida "Delan", "Strobe", "Poliram", "Albit", "Skor" ayaa la dagaalamaya cudurrada "apple".
Si aad u hesho dhaawacyada iyo dildilaaca, kaas oo la sameeyay inta lagu guda jiro geedi socodka qoryaha, adeegso beerka beerta "RanNet", oo ka kooban baraf sulfate iyo humate. Maadaama mashiinku uusan u adkeynin qoyaan, nidaamka waxaa lagu fuliyaa cimilada qalalan.
Sidoo kale kugula talin inaad isticmaasho mashiinka "BlagoSad" wax soo saarka ukun, kaas oo si wanaagsan uga jawaab celiya beeraleyda khibrad leh. Waxaa laga sameeyaa saldhigga dufanka dabiiciga ah waxaana si fiican loogu haynayaa jirida.
Ka dib marka la dhammeeyo shaqada diyaarinta, la soco habka. Heerka ugu sarreeya waxaa lagu xisaabiyaa qaaciddada: dhammaan stem dhan iyo saddex meelood oo ka mid ah laamaha qalfoofka. Dhirta dhirta ah waxaa lagu dhajiyaa dhererkoodu yahay 1.5-1.8 mitir, laakiin mabda 'ahaan, beerwaaq kasta oo khibrad leh ayaa isku deyaya inay sare u qaadaan.
Guud ahaan, geeddi-socodka xaaqidda guga iyo gu'ga waa isku mid.
Ka dib markaad aqriso maqaalkan iyo raacitaanka talooyinka sahlan, waxaad beertaada ka dhigi kartaa mid caafimaad leh oo si wanaagsan loo dhigo, wuxuuna ku siin doonaa midho goos goos ah.